Zvimiro | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Iwe unoshandura sei kubva kuUkrainian kuenda kuRussia Gilyak?
gilyak inoshandurwa sei kubva kuUkraine kuenda muchiRussia? Glyaka - mumutauro weRussia "gilyaka". Iri ibazi rine chinokwana senge chiRussia -isch mune izwi rekuti "bhuti". Iko hakuna izwi rakadaro muchiRussia. Duramazwi…
Misimboti yepamutemo yezvinyorwa zvemashoko yakaoma uye yakaoma kunzwisisa?
Mitemo yakakosha yekumisikidza mamakisi emutsara mumutsara wakaoma kunzwisisa. chero bhuku rekuverenga FRY, chikamu SYNTAX yemitsara yakaoma SSP (mukomboni), kurongeka kwemakoma. Inowedzera: 1) Pakati pezvikamu zveSSP zvine kubatana, kupokana uye kupatsanura ...
nzira yekusiyanisa chimiro chakakwana chechiito kubva kune vasina kukwana
kusiyanisa chimiro chakakwana chechiito kubva kune chisina kukwana Chimiro chakakwana chechiito chinopindura mubvunzo: chii chekuita?, uye chisina kukwana: zvekuita? Easy peasy! Chimiro chakakwana chechiito chinopindura mubvunzo wezvekuita, asi ...
Rondedzera mafirimu emutauro muChirungu. Kunyanya zviri nani. MuChirungu neshanduro
Nyora mhando dzemafirimu muChirungu. Iyo yakakura, iri nani. MuChirungu neshanduro kjk munhu wese anogona kusarudza yaanofarira mhando yemafirimu Kune mamwe marudzi emafirimu ...
Seme naShe Chii ichocho? Tsanangura, tapota, pane imwe muenzaniso.
Seme uye semema Chii ichocho? Ndokumbira utsanangure nemuenzaniso chaiwo. Sememe, kana semantheme (kubva muchiGiriki. Ini ndinoreva; izwi iri rinoumbwa nekufananidza nemazwi ekuti phoneme, morpheme) chikamu chechirongwa chemukati chemutauro, ...
Ndeipi nzvimbo yakasiyana nedzvimbo?
nzvimbo yacho yakasiyana sei nenzvimbo yacho? Imwe kupi, uye imwe uye sei. 1 inowanzova yangu uye 2 chinhu cheparutivi. Ngatitarisei pacheni uye tipindure: aya mazwi anoshandurana: Huru ...
maererano nemutemo upi wakarurama "kubva kumazana manomwe ema ruble", uye kwete "kubva pamazana manomwe"?
maererano nemutemo upi wakarurama "kubva kumazana manomwe ema ruble", uye kwete "kubva pamazana manomwe"? Tsiva izwi-zana- neizwi rekuti “noti” saka hauzombokanganisi! Kubva pamanomwe manomwe- kubva pamazana manomwe Pano mutemo wekudzikiswa kwenhamba unoshanda. Nemazvo…
Ndizvozvo sei: "kumirira mhinduro" kana "kumirira mhinduro"? Ndokunge, "kumirira chii" kana "kumirira chii"?
Ndizvozvo sei: "kumirira mhinduro" kana "kumirira mhinduro"? Ndokunge, "kumirira chii" kana "kumirira chii"? Ini ndinofunga kuti zvakadaro zvinotenderwa ... Izwi rechiito "mira" rinowirirana neanomhan'ara kana mhosva. Musiyano…
Ichokwadi here kuti Sanskrit yakafanana neRussia?
Ichokwadi here kuti Sanskrit yakafanana neRussia? Chokwadi. Asi kune mitauro yeEurope zvakanyanya seSanskrit kupfuura Russian. Izvi, somuenzaniso, Gypsy uye Ossetian. Iranian (Farsi) uye Afghan (pashtu) ...
Tulle, vheiri - rudzii?
Tulle, vheiri - rudzii? tulle-male veil-mukadzi Mamwe mazwi anochinja gender nekufamba kwenguva. Semuenzaniso zita. _Shadow_ yaimbove yechirume, nekudaro chimiro chinodzikira _shadow_. _Coffee_ yaimbove _kofiy_ - murume ...
Mubvunzo unonyadzisa mukati
Mubvunzo unonyadzisa mukati regai ndiedze kukutsanangurira. ... Fungidzira i8: 00 AM. Izvi zvinoreva kuti maawa masere chaiwo ezuva iro apfuura. Uye awa repfumbamwe rinotanga. Saka zvino…
rubatsiro rwekutsvaga ruzivo rwe: 1 strong fabric 2 strong man 3 strong frost 4 ushamwari hwakasimba
batsira kusarudza masynonimendi e: 1 jira rakasimba 2 munhu akasimba 3 chisimba chakasimba 4 hushamwari hwakasimba 1) machira akasimba, 2) munhu ane hutano, 3) kutsva kwechando, 4) ushamwari hwakanaka jira rakasimba - jira rakasimba munhu akasimba ...
pkdkazhit yak v_dredaguvati shoko ukr. movi
pidkazhit yak vidredaguvati mazwi mukr. movi Nevrno vikonuyuchy obov * mutauro wemunyori Keruyuchy kuderera kwemari pane dumka pane ruregerero rwakajeka .... tora chiys bk (chinyorwa pa ...) bvisa vatendi rstratsya vatori vechikamu mune zvdsi enda kumitemo ...
Belarus, Belarus, Belarus? Rakarurama sei? Belarusian kana Belarusian zvinhu? Munhu wacho muBelarusian here kana muBelarusian?
Belarus, Belarus, Belarus? Rakarurama sei? Belarusian kana Belarusian zvinhu? Munhu wacho muBelarusian here kana muBelarusian? Mumutauro weRussia, kwete chete izwi rekuti Belarus riri pasi pekushandurwa, asiwo pfungwa dzinobva kuvanhu veiyi ...
VaErzyans vanoita sei zvakasiyana kubva kune mokshan? Ko mitauro yakasiyana sei? m b vamwe kuenzanisa
Erzyans anotaridzika sei akasiyana neMokshans? Mitauro yakasiyana zvakadii? b. b. imwe mhando yekuenzanisa Victoria, apa, scroll down, kune zvakare tafura ine misiyano mumazwi: http://www.cigankin.ru/archives/581 Vazhinji maMordovia ...
German Inoshandiswa rini uye ndeupi musiyano pakati pe nicht, kein, nichts?
ChiJerimani. Dzinoshandiswa riinhi uye ndeupi musiyano pakati pe nicht, kein, nichts? nicht - not kein - no nichts - hapana Idzi inzira dzekuratidzira negation. Iwe haugone kufungidzira kuti zvakaoma sei ini ndiripo ...
Zita raRamil rinoenderana. Iri ndiro zita reTatar
Zita rekuti Ramil ndiro zvarinoreva. Iri izita rechiTatar.Zita rekuti Ramil, rakashandurwa kubva kuArabic, rinoreva mashiripiti, anoshamisa, mashura. MuchiArabic, raml zvinoreva kufembera mujecha, ...
Sei "asina mhosva" achigara akaparadzaniswa, uye "asina mhosva" kazhinji pamwe chete?
Sei "asina mhosva" achigara akaparadzana, asi "asina mhosva" kazhinji pamwe chete? .. uye "kwete" nezviito zvakanyorwa zvakasiyana 🙂 asi kazhinji, unofanira kuenda kuverenga sekuti "kwete" yakanyorwa nezvipikisheni, zvinobatanidzwa, zvipikisheni zvipfupi ...
Ungadzidza sei Estonian iwe pachako? Hapana vakadzidzisi vemutauro muguta, asi hatiregi!
Ungadzidza sei maEstonia uri wega? Iko hakuna varairidzi vemitauro muguta, asi isu hatisi kukanda mapfumo pasi! http://www.eki.ee/books/ekk09/ http://langust.ru/news/16_10_12.shtml http://openlanguage.ru/inform/inslozhnye_jazyki_mira http://www.languages-study.com/ eesti-links.html http://www.eestikeel.ru/ https://sites.google.com/site/eestikeelkool/ Rombo rakanaka! ChiEstonia hausi mutauro wakaomesesa uchienzaniswa ne ...
Chii chinonzi "Ndicha!" ChiJerimani? zvakanyorwa sei uye zvinorevei?
Chii chinonzi "Ndicha!" ChiJerimani? zvakanyorwa sei uye zvinorevei? jawohl Muuto - ndizvo chaizvo Muhupenyu hwakajairwa - hongu, chaizvo, chokwadi chaicho, chokwadi, zvirokwazvo Ja wohl! ...
Mibvunzo ye49 mu database yakagadzirwa mu 0,590 masekondi.